tufaax daawashada Archives - SmartMe
Dom » Galitaanada ku sumaysan "saacad tufaax ah"
Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku furno iPhone-ka 'Face ID' oo leh Apple Watchem
tufaaxa, watch apple, Aqoonsiga wajiga, iphone
Laga bilaabo Isniinta, oo ay weheliyaan macruufka 14.5 iyo daawashada OS 7.4, milkiilayaasha iPhone-ka ee leh Face ID waxay isticmaali karaan hab cusub oo lagu furo taleefannadooda casriga ah. Sidaa darteed, waxaan ku xusuusinaynaa sida loo qaabeeyo muuqaalka cusub iyo ...
Apple Watch oo leh shaashad jilicsan? Maxaa diidaya!
tufaaxa, watch apple, Patent, smartwatch
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay iyo codsiyada patent-ka, Apple waxay tixgelinaysaa suurtagalnimada isbeddel xag-jir ah oo ku yimaada muuqaalka saacaddiisa casriga ah. Kacaanku waa inuu ku daro, iyo waxyaabo kale, bedelida qaabka baqshadda iyo soo bandhigida shaashad jilicsan. Macrumors ayaa shaaca ka qaaday in Apple ay soo warisay habboon ...
Sidee Apple Watch u badbaadisay naf!
Waxa daabacay	Hubert Ryś
tufaaxa, watch apple, smartwatch
Sida aan wada ogsoonahay, tikniyoolajiyadu waxay badashaa nolosha dadka mararka qaarkoodna xitaa way badbaadisaa! Markan waxaa sameeyay smartwatch ka Apple. Sidee? Maxaa socda? Halkan ku saabsan! Ku saabsan nin ku dhacay barafka hoostiisa sida ...
Apple Watch-kaaga miyuu leeyahay dhibaatooyin lacag-bixin ah? Hel cusbooneysiintii ugu dambeysay!
16 Febraayo 2021
aktualizacja, tufaaxa, watch apple
Dhawaan, koox aad u tiro badan oo ka mid ah Apple Watch Series 5 iyo isticmaaleyaasha SE ayaa dhibaatooyin waaweyn ka haysteen inay saacaddadooda ku amraan. Dhammaan tilmaamaha ayaa ah in softiweerku khalad ahaa. Si loo saxo qaladka, kaliya soo dejiso ...
Apple HomeKit, News, jabnaanta
MediaMarkt waxay bilowday dallacsiin cusub. Apple Watch waa la heli karaa
12 Febraayo 2021
tufaaxa, watch apple, mediamarkt
Dukaanka MediaMarkt wuxuu u bilaabay xayaysiis kale macaamiishiisa. Markan waxaa loo abaabulay munaasabadda Maalinta Jacaylka. Haddii aad ka fikiri jirtay inaad ku qalabayso Apple Watch, hadda waa fursad weyn. Mid soo iibso oo ...
Toddobaadka kor u qaadista wax soo saarka Apple ee x-com! Qiimo dhimis soo jiidasho leh
27 Janaayo 2021
tufaaxa, watch apple, iphone 12, dallacsiinta, x-kom
Apple marar dhif ah ayaa go'aansata inay qiimo dhimis ku sameyso alaabteeda. Waqtigan, si kastaba ha ahaatee, waxaan kuu soo bandhigeynaa dhiirrigelin xiiso leh oo loogu talagalay dukaanka x-kom, taas oo aad uga mahadcelin karto inaad ka faa'iideysan karto qiimo-dhimista ku saabsan soo-jeedinta shirkadda ee alaabooyinka ka ...
Apple Watch 7 ayaa kuu oggolaan doonta inaad cabirto heerka sonkortaada? Qorshayaasha Halista ah ee Apple
26 Janaayo 2021
tufaaxa, watch apple, cabirka heerka sonkorta, smart smart, zegarek
Sparrows chirip in kii ugu dambeeyay ee Apple Watch 7 uu la imaan doono muuqaal cusub oo cusub. Waxaan halkaan uga hadlaynaa suurtagalnimada in la cabbiro heerka sonkorta. Xalkan ma arki doonaa sanadkan? Apple wuxuu damacsan yahay inuu hirgeliyo qorshayaasha hamiga weyn ee Cook ...
Sawirro noocooda ah Apple Watch kii ugu horreeyay oo daadanaya
4 Janaayo 2021
tufaaxa, watch apple, iphone
Sawirro cusub oo u muuqda inay yihiin nooc Apple Watch ah ayaa ka soo muuqday webka. Aaladda ayaa si uun u maamushay inay ka fogaato burburka waxayna leedahay barnaamij si buuxda u shaqeynaya. Sawirrada nooca Apple Watch ah waxaa helay ...
Algorithm tijaabada cusub ee ECG ee Apple Watch
watch apple, ecg
Iyadoo ay weheliso macruufka 14.3 iyo watchOS 7.2, algorithm cusub oo ECG algorithm ah ayaa ka muuqday saacadaha Apple. Cusboonaysiintaan si gaar ah looma darin, laakiin waa lagama maarmaan. Caafimaadka ayaa ugu muhiimsan. Sannadkan marar badan ayaan ka hadalnaa ...